निर्मलाका बाबु यज्ञराज किन मान्दैनन् रगत दिन ? | Kendrabindu Nepal Online News
20675695 749059 6358608 13568028
निर्मलाका बाबु यज्ञराज किन मान्दैनन् रगत दिन ?
२६ पुष २०७५, बिहीबार १४:२५
काठमाडौं । अनुसन्धानलाई सघाउन भन्दैं निर्मला पन्तकी आमाले रगत दिएपछि परिवारमा आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले बुधबार रगत दिएपछि बाबु यज्ञराजले ‘किन रगत दिएको ?’ भन्दै हातपात गर्दै दुर्ब्यबहार गरेका छन् ।
यज्ञराजले बिहीबार बिहानै भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखाम (महुलिया) स्थित घरमा आएर दुर्गादेवीलाई किन रगत दिएको भन्दै हातपात गर्दै दुर्ब्यबहार गरेका हुन् । उनले राहत रकम पनि बुझ्न लागेको र अनुसन्धानलाई सघाउ पुग्ने हिसाबले रगत दिएको भन्दै गालीगलौज गर्नुका साथै हातपात समेत गरेका हुन् ।
केन्द्रविन्दुसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा दुर्गादेवीले रुदै भनिन्, ‘तैले किन रगत दिईस्, कसलाई सोधेर रगत दिईस् भन्दैं लछारपछार गर्नुभयो । म भागेर बाहिर आएपछि पिट्न चाँही पाउनुभएन् । अब तैले बढी बोलिस भने तेरै घरको दैलोमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्छु भन्नुभएको छ । मलाई त डर लागेको छ । ’
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ को नमुनामाथि प्रश्न उठेपछि बैधानिकता जांच गर्न बुधबार दुर्गादेवीले रगत दिएकी थिइन । दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर पुगी डीएनए प्रोफाइल जाँच गरिपाउँ भन्दै निवेदनसहित रगत दिएकी थिईन् । तर निर्मलाका बाबु यज्ञराजले भने रगत दिन मानेका छैनन् । उनले घर परिवार तथा आफन्तहरुसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै रगत दिने भन्दै पन्छिदैं आएका छन् ।
दुर्गाले छोरी निर्मलाकै डिएनए हो वा होइन यकिन गर्न रगत दिएकी थिईन् । अब उनको रगतबाट निर्मलाकै डिएनए हो वा होईन यकिन गर्न सकिन्छ । तर यज्ञराजले रगत दिएको भए अनुसन्धानमा सजिलो पर्ने प्रहरीको बुझाई छ ।
डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना संकलन गरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै श्रीमान र सौताले दुर्ब्यबहार गरेको उनको गुनासो छ । ‘निर्मलाको स्वाबमा भएको डीएनए सही हो कि होइन भनेर जाँच्नुपर्ने माग हामीले नै गरेका थियौँ’, उनले भनिन्, ‘बुवा र मेरा रगतको नमुना लिने कुरा थियो । म तीन–चार दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएँ तर बुवा नगएपछि हिजो बाध्य भएर एक्लै रगतको नमुना संकलन गरेँ ।’
छोरीको हत्या भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि न्याय नपाइएको बताउँदै राहत रकम बुझ्ने निर्णय गरेकी थिईन् । उक्त राहत रकम बुझ्ने विषयमा परिवारमा विवाद सिर्जना भएको छ ।
दुर्गाले न्याय पर्खिंदा–पर्खिंदा दुई छोरीमाथि पनि अन्याय हुने भएकाले छोरीको भविष्य बनाउने भन्दै राहत बुझ्ने बताएकी थिइन् । उक्त राहत रकम बुझ्ने बताएपछि कान्छी श्रीमती लक्ष्मीसँगै बस्दैं आएका यज्ञराज बिहीबार बिहानै दुर्गादेवीको घरमा आएर दुर्ब्यबहार गरेका हुन् ।
यज्ञराजले रगत नदिनुको रहस्य के हो ?
अनुसन्धानमा सघाउँ पुर्‍याउन आमा बाबु दुवैको रगत संकलन गरेर निर्मलाको डिएनएसँग म्याच गराउन महिला अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका थिए । उनीहरुको माग अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले यज्ञराज र दुर्गादेवीलाई रगत दिन आह्वान गरेको थियो । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी रगत दिन तयार भईन् । तर बाबु यज्ञराजले भने मानेनन् । उनले उल्टै दुर्गादेवीलाई पनि रगत नदिन भने ।
रगत दिए आफु घरको दैलेमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्ने चेतावनी समेत दिए । जसले गर्दा निर्मलाकी आमा एकातिर श्रीमानको डर त अर्कोतिर छोरीले न्याय नपाएको चिन्तामा परिन् । अन्ततः उनले बुधबार रगत दिईन् । रगत दिएपछि यज्ञराजले घरमा रडाको नै मच्चाए । उनले बिहीबार बिहानै घरमा आएर हातपात गर्नुका साथै मार्ने प्रयास समेत गरे । तर दुर्गादेवी भागेर बचिँन ।
यज्ञराजले रगत दिन नमानेपछि सबै सशंकित बनेका छन् । कञ्चनपुरका अधिकारकर्मी तथा स्थानीयबासी यज्ञराजले रगत दिन नमान्दा अचम्ममा परेका छन् । केही स्वार्थी अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर यज्ञराजले अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउन लागेको स्थानीयको आरोप छ ।
अनुसन्धानमा सघाए अपराधी चाँडै पत्ता लाग्ने र त्यस्तो हुँदा आफुहरुको आन्दोल नै समाप्त हुने मनसायका साथ यज्ञराजलाई परिचालन गर्ने तत्वले यस्तो चाल चलेको हुन सक्ने एक स्थानीयको भनाई छ । नाम नबताउने सर्तमा ति स्थानीयले भने, ‘यज्ञराज जि ले किन रगत दिन मान्नुभएन् ? त्यसमै आशंका छ । एकातिर छोरीले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने अर्कोतिर अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने यो त दोहोरो चरित्र भयो । यसको पछाडि कुनै रहस्य लुकेका हुनुपर्छ ।’
यज्ञराजले रगत दिन नमान्दा दुईवटा शंका पैदा भएको छ । एउटा उनी छोरीको हत्यारा चाँडै पत्ता नलागुन् भन्ने चाहन्छन्, अर्को घटनामा उनी नै संलग्न हुन पनि सक्ने सम्भावना । उनले रगत दिन नमान्नुको पछाडि यी दुई कारण वाहेक अरु छैन् ।
यज्ञराजले किन रगत दिन नमाने भन्ने विषयमा आफुले केही पनि बुझ्न नसकेको दुर्गादेवीको भनाई छ । छोरीलाई न्याय दिलाई अपराधीलाई सजायको भागेदार बनाउन हामी दुवैको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा यज्ञराजले किन त्यस्तो गरिरहेको भन्नेबारे आफुलाई थाहा नभएको दुर्गादेवीले बताईन् । यसविषयमा यज्ञराजसँग सम्पर्क गरेर थप बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन् ।
गत साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न गएकी कञ्चनपुरको उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा साउन ११ गते शव फेला परेको थियो ।
kanchanpur, rape, दुर्गादेवी पन्त, निर्मला पन्त, बलात्कार, यज्ञराज पन्त
Prevहवाई इन्धनको मूल्य घट्यो
रामबहादुर बम्जनको आश्रमबाट २ जना पक्राउNext